ကျွန်တော် အိပ်မက်မက်တယ် - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၉၆၃ ခုနှစ် ဝါရှင်တန်ဒီစီ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး လူထုချီတက်ပွဲ၌ မာတင်လူသာကင်း မိန့်ခွန်းပြောဆိုနေပုံ
"ကျွန်တော် အိပ်မက်မက်တယ်"[မှတ်စု ၁] (အင်္ဂလိပ်: "I HaveaDream") သည် အမေရိကန်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ မာတင်လူသာကင်း ဂျူနီယာက ၁၉၆၃ ဩဂုတ် ၂၈ ၌ "အလုပ်အကိုင်နှင့် လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် လူထုချီတက်ပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သော လူထုမိန့်ခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါရက်၌ ကင်းက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအဆုံးသတ်ရေး၊ နိုင်ငံသားနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများကို တောင်းဆိုခဲ့လေသည်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့၊ လင်ကွန်းအမှတ်တရ အဆောက်အအုံ၏ လှေကားထစ်များမှနေ၍ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ထောက်ခံသူ လူပေါင်း နှစ်သိန်းခွဲကို မိန့်ကြားပြီး ထိုမိန့်ခွန်းစကားသည် နိုင်ငံသားအခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှု၏ အလွန်ထင်ရှားပေါ်လွင်သောဖြစ်ရပ်(အဆင့်) တစ်ခုလည်းဖြစ်ကာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမိုင်းတွင် အရေးပါအရာရောက်ဆုံးသော မိန့်ခွန်းများထဲ၌လည်း ပါဝင်လေ၏ ။
၁၈၆၃ တွင် ကျေးကျွန်သန်းပေါင်းများစွာကို လွတ်လပ်မှုပေးသော လွတ်လပ်မှုကြေညာချက်[မှတ်စု ၂] မှ စာသားများကို စတင်ကိုးကားပြောဆိုခဲ့ကာ ထို့နောက် ကင်းက "နှစ်တစ်ရာကြပြီးတဲ့နောက် နီဂရိုးများ အခုထိ မလွတ်လပ်သေးပါ" ဟူ၍ ပြောဆိုခဲ့သည်။ မိန့်ခွန်း၏ အဆုံးသတ်တွင် ကင်းက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ကြုံသလိုပြင်ဆင်လာခဲ့သော နိဂုံးပိုင်းကို "ကျွန်တော် အိပ်မက်တစ်ခုမက်တယ်" ဟူ၍ စတင်ပြောဆိုခဲ့သည်။ အဆိုပါစကားကို ပြောစေရန် စေ့ဆော်သူမှာ မဟာလီယာ ဂျက်ဆန် ဖြစ်၍ ဂျက်ဆန်က "မာတင် ... သူတို့ကို အိပ်မက်အကြောင်း ပြောပြလိုက်စမ်းပါ" ဟူ၍ဆိုသည်မှ စတင်ခဲ့သည်။ မိန့်ခွန်း၏ ဤနိဂုံးအပိုင်းသည် နားထောင်သူပရိသတ်များကို စိတ်လှုပ်ရှားမှု အမြင့်မားဆုံးဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး ယခုအခါ၌ အထင်ရှားဆုံးသော မိန့်ခွန်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုအပိုင်း၌ ကင်းက ကျေးကျွန်စနစ်၊ အမုန်းတရားတို့ရှိနေသော နယ်မြေ(တိုင်းပြည်)မှ လွတ်လပ်ခြင်း၊ တန်းတူညီမျှခြင်းတို့ ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာသည့် ၎င်း၏စိတ်ကူးအိပ်မက်များကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဂျွန် အဲလစ် မီးချန်က "အဲဒီစကားစုတစ်ခုတည်းနဲ့ကို မာတင်လူသာကင်းက တောမတ်စ် ဂျက်ဖာဆန်၊ အေဘရာဟမ် လင်ကွန်း တို့လို ခေတ်သစ်အမေရိကကို ပုံသွင်းတည်ဆောက်ခဲ့သူများနဲ့ အဆင့်တန်းတူ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။" ပညာတတ်များ၏ ၂၀-ရာစု လူထုမိန်ခွန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ၁၉၉၉ ခုနှစ် မဲရွေးချယ်မှုတစ်ခု၌ ထိပ်ဆုံးစာရင်းဝင်ဖြစ်လာခဲ့ကာ "အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသမိုင်းတွင် အကြီးကျယ်ဆုံးသော ခိုင်မာပြင်းထန်သည့် ပြောဆိုချက်မိန့်ခွန်း" အဖြစ်လည်း ဖော်ပြခြင်းခံရသည်။
၁.၁ မိန့်ခွန်းခေါင်းစဉ်နှင့် ရေးသားခြင်းအကြောင်း
၁၉၆၃ ဩဂုတ် ၂၈ တွင် ဝါရှင်တန်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦဆီသို့ လင်ကွန်းအမှတ်တရအဆောက်အဦမှချီတက်စဉ် မြင်ကွင်း
အလုပ်အကိုင်နှင့် လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် ဝါရှင်တန်လူထုချီတက်ပွဲသည် တစ်စိတ်တစ်ဒေသအားဖြင့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်းအတွက် လူထုထောက်ခံမှုကို သရုပ်ဖော်ပြသရန်ဖြစ်၍ ထိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရန် သမ္မတ ကနေဒီက ဇွန်လတွင် အဆိုပြုခဲ့၏ ။ ထို့ကြောင့်လည်း မာတင်လူသာကင်းနှင့် အခြားသောခေါင်းဆောင်များက ၎င်းတို့၏မိန့်ခွန်းပြောခြင်းများကို အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် နိုင်ငံသားအခွင့်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏ အမှတ်သင်္ကေတဖြစ်ခဲ့သော နိုင်ငံသားဥပဒေမလိုက်နာမှု (civil disobedience) များကို ရှောင်ရှားရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ မူလ၌ ကင်းက ၎င်း၏မိန့်ခွန်းကို "ကျွန်များအားလွတ်လပ်ခွင့်ပေးခြင်း ဥပဒေထုတ်ပြန်ချက်" ရာပြည့်အခါသမယနှင့် ကိုက်ညီစေရန်၊ အေဘရာဟန် လင်ကွန်း၏ ပန်ဆယ်လ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်၊ ဂတ္တီစဘာ့ဂ်မြို့တွင် ဟောခဲ့သော မိန့်ခွန်းကို အလေးအမြတ်ပြုရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။
ကင်းက အသွေးအရောင်ရှိသူများ (လူမည်းများ) ဖွံ့ဖြိုးရေး အမျိုးသားအစည်းအရုံးတွင် မိန့်ခွန်း (နီဂရိုးများနှင့် အမေရိကအိပ်မက်) စတင်ပြောခဲ့သည့် ၁၉၆၀ မှစ၍ စိတ်ကူးအိပ်မက်များအကြောင်းကို ဟောပြောလာခဲ့လေသည်။ ထိုမိန့်ခွန်းသည် အမေရိကန်တို့၏ စိတ်ကူးအိပ်မက်နှင့် အရှိတရားကြား ကွာဟမှုအကြောင်းကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားကာ လူဖြူပေါ်တင်ကြီးစိုးမှုဝါဒ ကျင့်သုံးသူများသည် အမေရိကအိပ်မက်ကို ချိုးဖောက်ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရသည် ၎င်းတို့၏ (ဤအရေး၌) စိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိခြင်း၊ သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်ခြင်း၊ တရားမျှတမှုအရေးကို သစ္စာဖောက်ခြင်း များမှတစ်ဆင့် ထိုအိပ်မက်ကို ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် အမာရွတ်စွဲထင်စေခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း စသဖြင့် ပြောကြားခဲ့သည်။ ကင်းက "နီဂရိုးများသည် အမေရိကန်တို့၏ စရိုက်လက္ခဏာ (အဇ္ဈတ္တ) ကို ကယ်ဆယ်ရန် ဘုရားသခင်၏တူရိယာတစ်လက် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်" ဟု ညွှန်းဆိုပြောကြားခဲ့သည်။ ၁၉၆၁ တွင် နိုင်ငံအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှု၊ ကျောင်းသားရေးရာလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတို့၏ တန်းတူညီမျှမှုနှင့်ပတ်သက်၍ "အိပ်မက်" အကြောင်းပြောကြားရာ၌ — "အမေရိကအိပ်မက် ... ယခုအချိန်ထိ ဆန္ဒမပြည့်ဝသေးသော အိပ်မက်တစ်ခု" — ဟူသည့်စကားရပ်ကို အချို့သော အမျိုးသားရေးမိန့်ခွန်းများ၊ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ၌ အဓိကဝေါဟာရအဖြစ် "အိပ်မက်" ဆိုသည်ကို ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
လင်ကွန်းအမှတ်တရအဆောက်​အဦရှေ့တွင် ကင်းနှင့် အခြားအလုပ်သမားခေါင်းဆောင်များ
၁၉၆၂ နိုဝင်ဘာ ၂၇ တွင် ကင်းက မြောက်ကာရိုလိုင်းနား၊ ရော့ကီးတောင်ရှိ ဘွတ်ကာတီ ဝါရှင်တန် အထက်တန်းကျောင်းတွင် မိန့်ခွန်းတစ်ခုပြောကြားခဲ့ရာ ထိုမိန့်ခွန်းသည် လင်ကွန်းအမှတ်တရအဆောက်အဦ၌ ပြောသည့် မိန့်ခွန်းထက်ပို၍ ရှည်လျားခဲ့၏ ။ စာသား၏ အပိုင်းများမှာ ဟိုဟိုသည်သည် ရွှေ့၍ပြောဆိုသည့်ပုံစံဖြစ်ပြီး အဓိကအပိုင်းသည် "ကျွန်တော်အိပ်မက်မက်တယ်" ဆိုသည်ကို သံပြိုင်စာကြောင်းအသွင်ဖြင့် ပြောဆိုသည်။ အထက်တန်းကျောင်း၌ ထိုသို့ပြောဆိုခဲ့သည်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ပြန်လည်တွေ့ရှိခြင်းဖြစ်၏ ။ အကြောင်းမှာ မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ် တက္ကသိုလ်က ၁၉၆၂ တွင်ပြောခဲ့သော ထိုမူကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်း၍ ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ပြောင်းကာ လူထုဆီသို့ ဖြန့်ချိလိုက်ခြင်းကြောင်းဖြစ်ပေသည်။
၁၉၆၃ ဒက်ထရွိုက်မြို့၌ အိပ်မက်မိန့်ခွန်းတစ်ခုကိုလည်း ပြောဆိုဖူးသေးသည်။ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဝေါလ်တာ ရူးသာက ဒက်ထရွိုက်မြို့၊ ယူနိုက်တက် ကားလုပ်သားသမဂ္ဂ (United Auto Workers ၊ ယခု - ကား၊လေယာဉ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ) ရုံးချုပ်ရှိ ညီညွတ်မှုအိမ်တော် (Solidarity House) တွင် ကင်းကို ရုံးခန်းတစ်ခန်းပေးထားကာ ကင်းက အဆိုပါအခန်း၌ ယခုဆောင်းပါးပါ "ကျွန်တော်အိပ်မက် မက်တယ်" မိန့်ခွန်းကို ဝါရှင်တန်လူထုချီတက်ပွဲကို မျှော်မှန်း၍ ရေးသားခဲ့သည်။ မဟာလီယာ ဂျက်ဆန်က "How I Got Over" သီချင်းကို မိန့်ခွန်းမတိုင်မီ သီဆိုခဲ့၍ ကင်း၏ မိန့်ခွန်းအကြောင်း သိရှိထားလေသည်။
ဝါရှင်တန်ချီတက်ပွဲတွင်ပြောဆိုသော မိန့်ခွန်းဖြစ်သည့် "ကျွန်တော် အိပ်မက်မက်တယ်" သည် မတူညီသောအချိန်ကာလအချို့၌ရေးသားခဲ့၍ မတူညီသောမူအချို့ရှိလေသည်။ ထိုမိန့်ခွန်း၏မူကြမ်းသည် တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပေ။ မူကြမ်းအချို့ကို ရောနှောပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်ကာ မူလက "Normalcy, Never Again" (ဖြစ်မြဲဓမ္မတာ၊ နောက်တစ်ခါ ဘယ်တော့မှ) ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ ထိုမူကြမ်းစာသားများသည် မောဟောက်စ်ကောလိပ်နှင့် အတ္တလန်တာတက္ကသိုလ်ဌာန "ရောဘတ် ဒဘလျူ ဝုဒ်ဒရပ်ဖ် စာကြည့်တိုက်" ရှိ မောဟောက်စ်ကောလိပ်၏ မာတင်လူသာကင်း ဂျူနီယာ စုဆောင်းအကန့်တွင် တည်ရှိသည်။ နာမည်ကြီး အာဖရိက-အမေရိက ဂေါ့စ်ပယ်လ်အဆိုတော် မဟာလီယာ ဂျက်ဆန်သီဆိုမှုအပြီး အခြားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက မိန့်ခွန်းပြောသည်။ ထိုနောက်မှ ကင်းက မိန့်ခွန်းပြောခဲ့၏ ။ ကင်းမိန့်ခွန်းအဆုံးသတ်ပိုင်း၌ ဂျက်ဆန်က ကင်းကို "သူတို့ကို စိတ်ကူးအိပ်မက်ဆိုတာတွေ ပြောပြလိုက်ပါ ... မာတင်" ဟု အော်ဟစ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါ ကင်းက ပုံမှန်ပြောဆိုနေမှုမှ သွေဖည်ပြီး "ကျွန်တော် အိပ်မက်မက်တယ်" ဟူသော စကားစုကို ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်သဘောအနေဖြင့် ညှပ်၍၊ ညှပ်၍ ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
ဤမိန့်ခွန်းမတိုင်မီ အခြားအရင်ပြောခဲ့ဖူးသော "အိပ်မက်မက်တယ်" ထပ်ကျော့စကားစုကို ၁၉၆၃ ဇွန် ၂၃ ၊ ဒက်ထရွိုက်မြို့၊ ကိုဘိုခန်းမ၌လည်း ပြောဆိုဖူးသေးသည်။ ဤဝါရှင်တန်ချီတက်ပွဲအပြီး ကိုဘိုခန်းမတွင် ပြောခဲ့သော မိန့်ခွန်းကို ဂေါ်ဒီတေးသံသွင်းက "လွတ်လပ်မှုအတွက် ချီတက်ပွဲကြီး" (The Great March To Freedom) အမည်ဖြင့် ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
စကားအတတ်ပညာနှင့်ပတ်သက်၍ အပြောင်မြောက်ဆုံးအဖြစ် ကျယ်ပြန့်စွာ ကောင်းချီးပေးခံရသော ကင်း၏မိန့်ခွန်းသည် အမေရိကသမိုင်းမှ အရေးပါသော မှတ်တမ်းမှတ်ရာ(ကြေညာချက်) များကို ယူငင်မှီငြမ်းထားရာ ပါဝင်သည့်မှတ်တမ်းများမှာ လွတ်လပ်ရေးကြေညာခြင်း၊ ကျွန်များကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးခြင်း၊ အမေရိကအခြေခံဥပဒေ စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်။ မိန်ခွန်းအစောပိုင်းတွင် ကင်းက အေဘရာဟန်လင်ကွန်း၏ ဂတ္တီစဘာ့ဂ်မြို့၌ပြောခဲ့သော မိန့်ခွန်းကို ရည်ညွှန်းရာ "လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တစ်ရာလောက်က..." (Five score years ago ...) ဆိုသော စကားရပ်ကို သုံးစွဲခဲ့သည်။ ကျေးကျွန်များအားလွတ်လပ်ခွင်းပေးခြင်းကို ရှင်းလင်စွာဖော်ပြထားသော ကျွန်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးအကြောင်းကို မှီငြမ်းပြုရာ၌ ကင်းက "သူတို့ရဲ့ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရတဲ့ ညတာရှည်ကြီး အဆုံးသတ်ရန် မြူးထူးဖွယ်ရောင်နီပျိုးလေခဲ့ပြီ" ဟု ဆိုခဲ့သည်။ စကားစုထပ်တလဲလဲအသုံးပြုမှုကို မိန့်ခွန်းတစ်လျှောက် အသုံးချကာ အစောပိုင်း၌ ကင်းက ပရိတ်အာရုံကိုဖမ်းစားရန် "ကဲ ... အချိန်ကျပြီ... " (အခုအချိန်သည် ..... အချိန်ရောက်ပြီ/ဖြစ်တယ်) ဆိုသည့်စကားစုကို ဆဋ္ဌမစာပိုဒ်တွင် သုံးခေါက်မျှသုံးနှုန်းထားသည်ငို တွေ့ရှိရလေသည်။ ကင်းက ၎င်းပရိသတ်ကြီးအား တညီတညွတ်၊ တပေါင်းတစည်းထဲသော အမေရိကနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိတ်ကူးပုံဖော်ဆေးခြယ် (ဖော်ပြ) ရာတွင် အမျာဆုံး ကိုးကားထားသော ထပ်ကျော့စကားရပ်မှာ "ကျွန်တော် အိပ်မက်မက်တယ်" ဟူသော စာသားဖြစ်၍ ရှစ်ကြိမ်မျှပင်သုံးစွဲခဲ့သည်။ အခြားထပ်ကျော့သုံးစွဲသည့် စာသားများ၌ "နှစ်တစ်ရာကြာသော်ငြားလည်း" ၊ "တို့တတွေ (စိတ်)မကျေနပ်နိုင်သေးဘူး" ၊ "ဒီယုံကြည်မှုနဲ့အတူ" ၊ "လွတ်လပ်မှုတရား ပျံ့နှံ့ပါစေ" ၊ နောက်ဆုံးမတော့ လွတ်လပ်ပြီ" စသည်တို့လည်းပါဝင်လေသည်။ ကင်းသည် ထိုနေ့အစီအစဉ်အရ မိန့်ခွန်းစကားပြောသူ ဆယ့်ရှစ်ယောက်တွင် ဆယ့်ခြောက်ယောက်မြောက်ဖြစ်ဖြစ်၏ ။
အခုထိတိုင်ပဲ ကျွန်တော်အိပ်မက်တစ်ခု မက်တုံးဗျာ၊ အမေရိကသားတို့ရဲ့အိပ်မက်ထဲမှာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း စိမ့်ဝင်နေတဲ့ အိပ်မက်မျိုး - တစ်ရက်တော့ ဒီနိုင်ငံကြီး နိုးထလာပြီး နိုင်ငံရဲ့အဆုံးမတရားနဲ့ လျှော်ညီစွာ ဖြစ်မြောက်လာမဲ့ အိပ်မက်မျိုး၊ "လူသားအားလုံးကို (ဘုရားသခင်က) တန်းတူညီမျှစွာ ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ အမှန်တရားတွေကို သိသာထင်ရှားဖို့ စွဲမြဲဆုပ်ကိုင်ထားရမယ်။ ကျွန်တော် အိပ်မက်တစ်ခု မက်တယ် ...
မိန့်ခွန်းတွင် ကိုးကားပြောဆိုမှုအများဆုံးဝါကျသည် "ကျွန်တော်အိပ်မက်တစ်ခု မက်တယ်။ ကျွန်တော့်ကလေး လေးယောက်က အသားအရေအရောင်အသွေးနဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုတဲ့နိုင်ငံ၊ ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တနဲ့ပဲ ခွဲခြားကြတဲ့နိုင်ငံမှာ တစ်နေ့ကျ နေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ အိပ်မက်ပဲဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့ ကျွန်တော် အိပ်မက်တစ်ခု မက်တယ်ဗျာ။"
အမေရိကအောက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်လူးဝစ်က "လင်ကွန်းအမှတ်တရအဆောက်အဦပေါ်ရှိ လှေကားထစ်လေးတွေကို ထာဝရတစ်သက်ပတ်လုံး မှတ်မိသတိရစေမဲ့ အထိမ်းအမှတ်နေရာတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ စွမ်းအား၊ စွမ်းရည်အပြည့်ဒေါက်တာကင်းမှာ ရှိပါတယ်" ဟုဆိုခဲ့သည်။ ထိုပုံစံဖြင့် မိန့်ခွန်းပြောခြင်းအားဖြင့် ဒေါက်တာကင်းသည် ထိုစဉ်အတွင်းရှိနေသော လူထုကိုသာမက အမေရိကတစ်ခွင်လုံးနှင့် မမွေးသေးသော အနာဂတ်မျိုးဆက်အသစ်များကိုပါ ပညာပေး၊ စေ့ဆော်၊ အသိပေးနိုင်ခဲ့လေသည်။ ကင်း၏ မိန့်ခွန်းသည် ကင်းကြုံတွေ့ရသော လူမှုနောက်ခံအခြေနေဖြစ်သည့် "မိမိနောက်ခံ၊ ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်စံထား၍ အခြားနောက်ခံ၊ ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို ကဲ့ရဲ့ရှုံချစော်ကားခြင်း" ၊ လူမည်းများအပေါ် အခွင့်ရေးယူခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်း စသည်တို့ကို ရောင်ပြန်ဟပ်၏ ။ လူအားလုံးအတွက် လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှုကို ထောက်ပံ့ပေးရန်ဆိုသော တည်ထောင်ထားသည့် နိုင်ငံအဖြစ် အမေရိကသားတို့၏ စိတ်ကူးယဉ်ပုံဖော်မှု (သို့) ဒဏ္ဍာရီ (myths) ကို (လုပ်ဆောင်ရန်) မေတ္တာရပ်ခံချက်အပေါ်၌ ကင်း၏မိန့်ခွန်းသည် အခြေတည်သည်။ ထို့နောက်လည်း မိန့်ခွန်းသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ခံအခြေနေအတွင်းတွင် ထို(အထက်ပါဆိုခဲ့သော) လောကီရေးရာ ဒဏ္ဍာရီများ(စိတ်ကူး)များကို "လူမျိုးအားလုံး တန်းတူညီမျှမှုသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့်ကိုက်ညီသည်" ဟု အခိုင်အမာဆိုလိုက်သည်က ဝန်းရံထောက်ပံ့ခိုင်ခံစေသည်၊ ပို၍ပင် ကျော်လွန်သွားစေသည် ဖြစ်၏ ။ ထို့ကြောင့် ထိုမိန့်ခွန်း၏ စကားအတတ်ပညာသည် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအပြစ်ကြီးကို ပြန်လည်ပေးဆပ်အဖတ်ဆယ်ရာ၌ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေခဲ့လေသည်။ "အမေရိကသည် ၎င်း၏ ကတိစကားသစ္စာကို စောင့်ထိန်းရန် ပျက်ကွက်၏" ဟု ကင်းက ဖော်ပြကာ ဆက်လက်၍ "အမေရိကသည် နီဂရိုးများကို ဆိုးရွားသော ချက်လတ်မှတ်တစ်စောင်ကို ပေးခဲ့ကြပြီ၊ ဝါရှင်တန် ဒီ စီ သို့ ချီတက်ကြရင်း ဒီမကောင်းတဲ့ ချက်လက်မှတ်ကို ရအောင် ငွေလဲကြမယ်ဗျာ။"[မှတ်စု ၃]
↑ dream ကို အိပ်မက်ဟု တိုက်ရိုက်သုံးစွဲထားသည်။ ဤ၌ အိပ်မက်ဆိုသည်မှာ ညအိပ်နေစဉ် ထင်လာသောအာရုံများကို ဆိုလိုသည်မဟုတ်ဘဲ စိတ်ကူးအိပ်မက်၊ မျှော်မှန်း/မျှော်လင့်ချက်အိပ်မက် စသည်တို့ကို ရည်ညွှန်းသည်။
↑ လွတ်လပ်မှုကြေညာချက်သည် ၁၈၆၂ စက်တင်ဘာ ၂၂ ၌ သမ္မတ လင်ကွန်းက ကျေးကျွန်အဖြစ်ရှိသောသူများကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးသည့် ကြေညာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ (see: Emancipation Proclamation at English Wikipedia.
↑ တင်စား၍ ပြောဆိုနေခြင်း : တစ်စုံတစ်ဦးက ချက်လတ်မှတ်ရေးခြင်းသည် အခြားတစ်ဦးထံသို့ ငွေပေးမည်ဆိုသော ကတိပေးခြင်းဖြစ်၏ ။ ထို့ကြောင့် အခြားလူက ကတိပေးထားသောငွေကို ရအောင်လုပ်ဆောင်မည်။ ဤ၌ နိုင်ငံ၏ လူမျိုးရေးတန်းတူညီမျှမှု အခြေခံကတိကို မလိုက်နာပျက်ကွက်မှုကြောင့် ကတိကို ရရှိအောင်လုပ်မည်စု အဓိပ္ပာယ်ရရှိသည်။
↑ Special Collections, March on Washington, Part 17။ Open Vault။ at WGBH (August 28, 1963)။
↑ Hansen၊ D, D. (2003)။ The Dream: Martin Luther King Jr. and the Speech that InspiredaNation။ New York, NY: Harper Collins။ p. 177။ OCLC 473993560။
↑ Tikkanen၊ Amy (August 29, 2017)။ "I HaveaDream"။ Encyclopædia Britannica။ May 7, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Echols, James (2004), I HaveaDream: Martin Luther King Jr. and the Future of Multicultural America.
↑ See Taylor Branch, Parting the Waters: America in the King Years 1954–1963.
↑ Nicolaus Mills, "What Really Happened at the March on Washington?", Dissent, Summer 1988; reprinted in Civil Rights Since 1787: A Reader on the Black Struggle, ed. Jonathan Birnbaum and Clarence Taylor, New York: New York University Press, 2000.
↑ Meacham, Jon။ "One Man"၊ Time၊ August 26, 2013၊ စာ- 26။
↑ Stephen Lucas and Martin Medhurst (December 15, 1999)။ I HaveaDream Speech Leads Top 100 Speeches of the Century။ University of Wisconsin–Madison။9July 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ O'Grady၊ Sean။ "Martin Luther King's 'I HaveaDream' speech is the greatest oration of all time"၊ April 3, 2018။
↑ X၊ Malcolm; Haley၊ Alex (1973)။ Autobiography of Malcolm X။ New York။ p. 281။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named KingInstitute
↑ Martin Luther King Jr., "The Negro and the American Dream", speech delivered to the NAACP in Charlotte, NC, September 25, 1960.
↑ Cullen၊ Jim (2003)။ The American Dream: A Short History of an Idea that ShapedaNation။ New York: Oxford University Press။ p. 126။ ISBN 0195158210။
↑ ၁၅.၀ ၁၅.၁ New recording: King's first 'I haveadream' speech found at high school။ CNN။
↑ How Langston Hughes Led To A 'Dream' MLK Discovery။ The E.W. Scripps Co။ 23 July 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 23 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Recording of MLK's 1st 'I HaveaDream' speech found (August 11, 2015)။
↑ O'Brien၊ Soledad။ "Interview With Martin Luther King III"၊ CNN၊ August 22, 2003။
↑ Kaufman၊ Dan။ On the Picket Lines of the General Motors Strike (in en)။
↑ Kot၊ Greg။ "How Mahalia Jackson defined the 'I HaveaDream' speech"၊ BBC၊ October 21, 2014။
↑ Norris၊ Michele။ "For King's Adviser, Fulfilling The Dream 'Cannot Wait'"၊ NPR၊ August 28, 2013။
↑ Hansen 2003, p. 70. The original name of the speech was "CashingaCancelled Check", but the aspired ad lib of the dream from preacher's anointing brought forthanew entitlement, "I Have A Dream".
↑ Hansen 2003, p. 58.
↑ Boyle၊ Kevin (May 1, 2007)၊ Detroit's Walk To Freedom၊ Michigan History Magazine
↑ Garrett၊ Bob၊ Martin Luther King Jr. and the Detroit Freedom Walk၊ Michigan Department of Natural Resources – Michigan Library and Historical – Center Michigan Historical Center၊ 1 March 2014 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး၊ February 15, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
↑ Ward၊ Brian (1998)၊ Recording the Dream၊ 48၊ History Today
↑ Document for August 28th: Official Program for the March on Washington။ Archives.gov။
↑ Edwards, Willard. (August 29, 1963). 200,000 Roar Plea for Negro Opportunity in Rights March on Washington. Chicago Tribune, p. 5.
↑ Excel HSC Standard English, p. 108, Lloyd Cameron, Barry Spurr – 2009
↑ "A "Dream" Remembered"၊ NewsHour၊ August 28, 2003။ 25 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on4May 2006။
↑ Exploring Religion and Ethics: Religion and Ethics for Senior Secondary Students, p. 192, Trevor Jordan – 2012.
↑ See David A. Bobbitt, The Rhetoric of Redemption: Kenneth Burke's Redemption Drama and Martin Luther King Jr.'s "I HaveaDream" Speech, Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2004.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကျွန်တော်_အိပ်မက်မက်တယ်&oldid=726981" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။